Ngokwezibalo, u-90% sabantu wahlala herpes igciwane emzimbeni. Ngenhlanhla, kubonakala sengathi kuphela buthakathaka komzimba, hypothermia ezinzima, ukucindezeleka noma esinye isifo. imithi yesimanje ine ekuchithweni kwayo izindlela ezihlukahlukene ukuze silwe herpes.
Cold on the izindebe, impatho ngamafutha "Gerperaks"
Namafutha kuboniswa primary futhi yansukuzonke imvelo herpetic of Izilonda, nezicubu mucosal, herpes zangasese. Phakathi izimpawu ukusetshenziswa "Gerperaksa" ubufakazi ka-herpes zoster, zoster, elula -herpes keratitis. Wamafutha "Gerperaks" isetshenziselwa lokuvimbela ukuphathwa izilonda ezibandayo kubantu abane-AIDS.
Isenzo kwemithi zomuthi sasitholakala njengenhlangano namagciwane. selectivity High kuqinisekisa lapho kubhujiswa lesi igciwane herpes.
I-Herpes wamafutha kuvimbela ukusabalala kwezifo, kunciphisa ematfuba nesenzakalo yezinkinga visceral futhi isikhumba ukusabalalisa. "Gerperaks" Akhuthaza ukwakheka kwe uqweqwe phezu amawala, aqede ubuhlungu nobuhlungu acute herpes zoster. Kancane ke uba umenzeli immunostimulating.
Cold on the izindebe, ukwelapha "Alpizarinom" kusho kusuka amaqabunga umango
Umuthi senzelwe ekwelapheni izilonda zesikhumba, umlomo kanye nolwelwesi lwamafinyila we herpes simplex virus, samabhamuza ezithweni zangasese, kanye ukuqubuka nezinye imvelaphi.
"Alpizarin" iyasebenza medium extracellular. It ayikuvumeli Ukungena igciwane esitokisini, ukubhidliza kabusha amagciwane. wazibonakalisa
imiphumela immunostimulatory ye-ejenti zokwelapha. Lapho kuqhuma phezu izindebe "Alpizarin" isetshenziswa ekwelapheni amaphilisi wamafutha. Ngaphakathi uqoke abadala 1-2 amaphilisi ngaphandle ngokuphathelene ukudla izikhathi 3-4 nsuku zonke. Ngesikhathi esifanayo gcoba ezindaweni elikhanyayo 2% wamafutha "Alpizarina". Inkambo yokwelashwa Uthatha izinsukwana izinsuku 5 kuya ku-15, ezimweni ezinzima kakhulu, isikhathi eside.
Cold on the izindebe, impatho ngamafutha "Gerpferon interferon"
Umuthi senzelwe ekwelapheni herpes eyinhloko futhi yansukuzonke ekhombisa temlomo mucosal ebusweni zangasese herpes.
Kunconywa ukuba gcoba ukuqubuka sezindebeni izikhathi 5 usuku ngalunye, cishe amahora angu 4. Uma impatho iqalisiwe ngesikhathi, lwehlise isipiliyoni izimpawu iziguli kanye kwelashwa izinsuku 5, ezimweni ezingajwayelekile, izinsuku ezingu-10.
Cold on the izindebe, impatho ngamafutha "Gevizosh"
Izinkomba izifo oyingozi futhi yansukuzonke kwesikhumba, kuhlanganise izindebe, umthondo, le lwamafinyila ulwelwesi izicubu, okubangelwa simplex herpes. Namafutha sisetshenziswa ngaphandle nivame lip ukuqubuka izikhathi 3-5 nsuku zonke. Kwanele ukuba babanikeze ukwelashwa ngoba 3 kuya 5 izinsuku ukufinyelela umphumela oyifunayo. Ngo kwegazi, "Gevizosh" ayitholakali. Ingqikithi asebenzayo epervudin kahle ingena esikhunjeni endaweni isicelo ifinyelela lokuhlala eliphezulu.
Cold udebe, ukwelashwa "Panavir" akhiphe gel-nahlanza amazambane amahlumela
Umuthi udumo izifo Lokudabuka viral, izinhlobo ezahlukene herpes. Isetshenziswa ukwelapha abesifazane abalungiselela ukukhulelwa, kodwa uhlushwa lesi sifo singalapheki ezibangelwa amagciwane. Ijeli lisetshenzisiwe izindebe obukhulu isayithi ngaphandle kokuthi bezihlikihla 5 izikhathi ngosuku. Yokutakula kwenzeka ezinsukwini ezingu-4-5.
iwayini mulled for imikhuhlane
iwayini mulled iphekwe ku iwayini semi ezomile noma ezomile abomvu. Isiphuzo wakhonza hot. Ukuthuthukisa nomphumela oqabulayo of spice wanezela. Kwezinye izifunda njengoba isisekelo ukusetshenziswa ugologo noma utshwala, kodwa buhlanjululwe okuqukethwe utshwala yalesi siphuzo 7%. Phakathi ukupheka ukuze abilayo mulled ayilungiswanga. Inhlanganisela zamakha ziyehluka zokupheka ezahlukene. Classic samuntu mulled siqukethe oqoshiwe orange imibuthano, peppercorns abamnyama, clove, usinamoni, uju kanye ingcosana kasawoti. Zonke izithako athululwa newayini elibomvu, ukufuthelana kwelokuthi. Phuza ungiphuzise abandayo.
Sula Pigment: Sebenzisa izici, amacebiso awusizo